मुख्यमन्त्री नै भन्छन्- संघीयता असफल पारिँदै छ
कर्पोरेट नेपाल , ६ मंसिर २०७५, बिहीबार, ०५:४१ pm
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही शक्तिहरु नेपालमा संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन । बिहीबार संवाद चौतारीमा शाहीले संघीयता नरुचाउने केही शक्तिहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच अधिकारको विवाद सल्काएर यसलाई बदनाम बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
कम्यूनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत दिएर जनताले अग्नी परिक्षा दिएको भन्दै उनले कसैलाई पनि दोष दिएर अहिलेको सरकार उम्कन नपाउने बताए । शाहीले संघीयता कागजमा व्यवस्था गरे पनि सोचमा स्थापित हुन नसकेको भन्दै नयाँ ब्यवस्थामा अभ्यस्त हुनका लागि ‘बे्रन वार’ चलाउनुपर्नेे बताए ।
केन्द्र सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारबारे अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट अधिकार नदिएर काम गर्न कठिनाई भएको उनको भनाई छ । शाहीले केही दिनमै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच हुनलागेको समन्वय परिषद बैठकमा यसबारेमा आफूहरुले विशेषरुपमा कुरा उठाउने जानकारी दिए । एक फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै विदा गरेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने आँट केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने समेत बताए ।
‘रेडलाइट एरिया खोलेर कर उठाउने, अनि संघीयता चलाउने ? यस्तो काम नगर’
‘योजना आयोग केही व्यक्तिलाई जागिर लगाउने संयन्त्रका रुपमा मात्रै सीमित नहोस्’
संघीयता खारेज गर्न संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चित्रबहादुरकोे घोषणा
काँग्रेस नेताको प्रश्न- दुईतिहाई बहुमत भएको पार्टी हुँदाहुँदै किन चाहियो राष्ट्रिय सरकार ?
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसक्यो, पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ’
गृहमन्त्रीको प्रश्न- चुनावमा हार्ने अनि दुईतिहाईको सरकार ढाल्न खोज्ने ?
‘लकडाउन’ फेरि लम्ब्याइयो, हवाई उडान अझै चार साता बन्द गर्ने निर्णय
बजेटले घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्योः महासंघ
बजेट सन्तुलित छ, निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन होस्ः चेम्बर
वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ युवा समितिले ८२ परिवारलाई बाँड्यो खाद्य सामग्री
पाकिस्तानले सुरु गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान, लकडाउन खुकुलो
कूटनीतिक वार्तामार्फत भारतसँग भूमि फिर्ता गर्छौंः भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याल
एनआईसी एशिया बैंकको एटिएम फुटाएर पैसा झिक्न खोज्ने १ जना पक्राउ